China Vacuum ganda muchina fekitari uye bhizimisi | Boya
Chinoshanda sei ?
Rudzi rwekupakata rwakasiyana neyakajairwa vhara yekupakata muchina.Chinyakare vhara yekupakata muchina akakodzera mabhegi asi ganda rekutsiva kurongedza muchina unoshandiswa kumafirimu .This muchina unogona kutsemura ganda firimu mune mbiri yekuvharira kamuri uye kushandisa 2 akasiyana akajairwa vharuvhu kumanikidza mukati makamuri maviri ekuwana iko kuita kweganda, ita kuti iyo firimu inamatire kune chigadzirwa zvakanyanya.
●Kamuri yemuchina saizi: 700x500x135mm
●Simba remagetsi: 380V / 50HZ 4KW
●Muchina Kurema: 280kg
Yedu yeganda yekuchenesa muchina wekushandisa inoshandiswa isina chinhu uye akasununguka-akamira ayo akakodzera zvakakwana kurongedza yakakura hombe yezvigadzirwa. Iyo yakakwira nhanho yesimbiso yemhando yemhando inosimbisa kuti yakanyanya pack chengetedzo inowanikwa. Kutenda kune yavo nharembozha uye compact dhizaini, iwo michina anokwanisa kushandiswa chero kupi, kuitira kuti nzvimbo yavo inogona kuchinjwa nekukurumidza zvakanyanya. Zviri nyore kwazvo uye nyore kushandisa.
Ndinogona here kuva nemucherechedzo wangu pamachine?
Hongu, tinogona kukugadziridza kudhinda iwe.
Iwe bespoke muchina?
Tinogona kukuitira muchina, asi neMOQ.
Pashure: Vacuum imba muchina
Zvadaro: Mhepo cusion firimu